Isitshalo se-White Sage: Umhlahlandlela Okhulayo, Ukubhema, Nezimbewu - Amakhambi
Isitshalo se-White Sage: Umhlahlandlela Okhulayo, Ukubhema, Nezimbewu
Ukubuka konke kwe-White Sage
Kuyini i-White Sage?
Umlando Omfushane Wokusetshenziswa KwamaSage Esizwe
Ukubhema noma Ukuhlanza Intuthu
Ukunakekelwa kweSage White
Ukukhula kweSage Emhlophe Kusuka Embewini
Ukukhula kweSage Emhlophe Kusuka Kusika
Ukufakelwa kabusha nokubuyisela kabusha
Izindlela Zendabuko Zokukhula
Ukuvuna nokugcina i-White Sage
Isikhathi Sokuvuna I-Sage Emhlophe
Ungayivuna Kanjani I-Sage Emhlophe
Inothi Mayelana Nokuvuna Okusendle Sage White
Q: Kungani amaqabunga ami amhlophe ephenduka abomvu?
Umbuzo: Ngingathola malini isitshalo esisodwa?
Q: Ngingayitholaphi imbewu emhlophe yesage?
Uma kukhona noma yimuphi umuthi onomlando omude futhi ogqamile, kuyisitshalo se-sage esimhlophe, esibizwa nangokuthi i-salvia apiana.
Isetshenziswa kakhulu phakathi kwabantu baseCalifornia abantu besizwe amakhulu eminyaka, lesi sitshalo sinamagama amaningi anikezwe izizwe ezisisebenzisile.
AmaThongva, abuye abizwe ngesizwe saseGabrielino, awabiza ngokuthi kasiile futhi awathola emagqumeni azungeze indawo manje eyaziwa njengeLos Angeles. Isabizwana esifanayo, qas’ily, sasetshenziswa ngabantu bakwaChumash ababehlala ngasogwini lwamanje lwaseSanta Barbara. Isizwe esingaphakathi nezwe saseLuiseno sabiza lesi sitshalo njenge-qaashil. Kubantu baseKumeyaay ababesendaweni ezungeze iSan Diego yanamuhla, yayaziwa njenge-shlhtaay.
Ibhekwa njengesitshalo esingcwele, ibisetshenziselwa ukudla, imithi nezinye izinjongo eziningi.
Ngenkathi isitshalo ngasinye se-salvia apiana singaphila iminyaka eminingi endle uma indawo ezungezile ilungile, abantu abaningi bakuthola kunzima kakhulu ukukhula engadini. Kodwa-ke kungaba isitshalo esihle nesifanele ukuba naso.
Ngakho-ke ngicela, ufunde umkhombandlela wensimu ejulile waleli khambi lasendulo. Ngenkathi sikhona, sizoxoxa ngendlela engcono yokukhulisa lesi sitshalo ukuze sisetshenziswe ngokuhlobisa kanye nokuqoqa amakhambi aphikisayo!
Amagama ajwayelekile Isazi esimhlophe, isazi esimhlophe saseCalifornia, isazi esingcwele esimhlophe, umkhulu isazi, inyosi, inyathi, namagama wesizwe amaningi
Igama Lesayensi USalvia apiana
Umsuka ISouthern California nezingxenye ezisenyakatho neMexico
Ukuphakama Kungafika kokungu-6 ’ubude, kungasabalala cishe kubanzi kepha ngokujwayelekile kubanzi okungu-3-4
Khanyisa Ilanga eligcwele, akukho mthunzi
Amanzi Kubekezelela kakhulu isomiso. Izitshalo ezisunguliwe zidinga amanzi amancane.
Ithempelesha Kunesimo sezulu esifudumele. Ayithandi amazinga okushisa angaphansi kwamakhaza, ayenzi ngaphansi kwezinga-25 lamaFahrenheit.
Umswakama Ingabekezelela umswakama kepha ingaba nezinkinga zezifo
Umhlabathi Inhlabathi, ekhipha kahle kakhulu inhlabathi
Umanyolo Akukho manyolo odingekayo. Ithanda izimo ezinomsoco ophansi.
Ukusakazeka Ngembewu noma ngokusika
Izinambuzane Izintwala, izimpukane ezimhlophe, izibungu eziyizicaba, izibungu zesicabucabu. Iphinde itheleleke ku-powdery isikhutha, ukugqwala, nokubola kwezimpande.
ISalvia apiana, evame ukubizwa ngeCalifornia White Sage, isitshalo esikhulu sogwadule esingapheli. Ikhula ngamaqoqo acijile emhlabathini oyisanti, imvamisa ezindaweni ezisezansi eningizimu yeCalifornia zehle ziye eMexico. Igama lalo livela emaqabungeni, anombala oluhlaza okotshani kubo uma usanda kutsha futhi ojika ube mhlophe ngokumpunga uma womisiwe.
Endle, i-sage emhlophe ingahlala ikhule ibe ngamamitha ayisithupha ubude nezinyawo eziningi ububanzi. Iziqu zayo ezinde zivela empandeni emaphakathi futhi zihlala isikhathi sonyaka esisodwa ngaphambi kokumisa nokubuyela emuva. Njengesitshalo sasogwadule, sithanda izimo ezishisayo nezomile.
Sekuyinto ethandwa ngabantu abakhetha izingadi ezinamanzi aphansi, futhi ingafakwa kalula phakathi kwezinye izitshalo ezinamanzi aphansi ukuze kube nomphumela omuhle. Uma uzama ukonga amanzi, lokhu kungaba isitshalo esihle kuwe!
Ngaphambi kokuba sixoxe ngokusetshenziswa kwesazi esimhlophe phakathi kwezizwe, kubalulekile ukuthi sazi ukuthi akusondeli ngisho nohlobo kuphela lwesazi esasetshenziswa ngokwesiko ngabantu bezizwe. Eqinisweni, ukusetshenziswa kwesazi esimhlophe kwakuyinto evamile ngokwesiko phakathi kwezizwe zasogwadule oluseningizimu-ntshonalanga, ngoba akuzange kukhule kwenye indawo.
Phakathi kwabantu baseCalifornia, isazi esimhlophe kwesinye isikhathi kubhekiswa kuso ngokuthi umkhulu, njengoba sikhula sibe sikhulu kakhulu esimeni saso sabadala kunanoma yiziphi ezinye izazi eCalifornia. Futhi kukhona, empeleni, ezinye izazi zomdabu! I-Salvia melifera (i-sage emnyama) ne-salvia officianalis (i-sage yensimu noma i-sage yokupheka) zivamile eCalifornia yonke nase Mexico, futhi.
Ngenkathi ezikhathini zanamuhla, i-sage emnyama isakazeka ngasenyakatho futhi ithatha indawo lapho kwakukhula khona isazi esimhlophe, ayisetshenziswa ngendlela efanayo. Isazi elimnyama linephunga elifana ne-acrid ne-chapparal, futhi ngokwesiko lalisetshenziswa emicimbini ethize kakhulu, lapho isage emhlophe isetshenziswa kakhulu ukusetshenziswa kwansuku zonke.
Kodwa-ke, laba bobabili babukeka befana, yize isazi esimnyama sithambekele ekubeni sifushane futhi sibe mpunga kakhulu kunokumhlophe lapho somisiwe. Amaqabunga esazi elimnyama nawo mancane futhi mancane kune-sage emhlophe.
Kukhona nezinye izitshalo okukhulunywa ngazo njengezazi ezingezona neze izazi. Amabili avame kakhulu lawa yi-Artemisia cana (i-sagebrush yesiliva, ebizwa nangokuthi i-Badlands sage noma i-South Dakota sage) ne-Artemisia tridentata (i-sagebrush enkulu, i-desert sage, i-mountain sage, namanye amagama amaningi).
I-Artemisia cana kwesinye isikhathi ibizwa ngeSundance sage ngoba isetshenziswa kakhulu ngabaseLakota nezinye izizwe njengengxenye yomcimbi weSundance. Lesi sitshalo sikhula emathafeni asenyakatho ye-United States, futhi kunzima ukusithola ngaphandle kwaleyo ndawo. Amaqabunga awo mancane kune-sage emhlophe yaseCalifornia futhi anephunga elihluke ngokuphelele.
Ngokuqhathanisa, i-Artemisia tridentata isakazeke ngendlela emangalisayo, ekusetshenzisweni kwesizwe nasendaweni ekhulayo. Lesi sitshalo esinamaqabunga amancane sisetshenziswa ngokufana nesalvia apiana ngokwenkambiso, kepha iphunga laso lingachazwa kakhulu njengephunga le-sage elinothuli. Ingatholakala ngaphesheya kwengxenye esentshonalanga ye-United States endle.
Kunolunye uhlobo lwe-Artemisia okufanele lwaziwe lapha: i-sagebrush emhlophe, i-Artemisia ludoviciana. Ikhula ezindaweni ezifanayo neSalvia apiana, futhi ibukeka icishe ifane neSalvia apiana nayo. Noma kunjalo, ingakhula ngomthunzi oyingxenye esikhundleni somthunzi ogcwele. Iphunga lalesi sitshalo lifana nephunga le-sage elinothuli le-Artemisia tridentata. Isetshenziswa ngokwelapha ngabantu besizwe.
I-sage emhlophe ngokwesiko yayisetshenziselwa izinhloso zomkhosi noma zokwelapha. Okwaziwa kakhulu kulokhu kusetshenziswa ukukushisa ukuze kukhishwe intuthu yayo enephunga elimnandi. Ngenkathi igama elithi 'smudging' livame ukusetshenziswa kule nqubo, imvelaphi yalelo gama empeleni ivela eYurophu yangenkathi ephakathi. Igama elinembe kakhudlwana kungaba ukuhlanza intuthu.
Intuthu ekhiqizwayo ibisetshenziselwa ukuhlanza noma ukuhlanza izinto ngokuziphephetha entweni. Iphinde yasetshenziswa ngokufanayo ukuhlanza noma ukuhlanza abantu ngendlela efanayo. Abaholi bokomoya besizwe bangaba nabalandeli noma izimpaphe ezikhethekile abazisebenzisela le njongo, kuya ngemibono yenkolo ethile.
Ngenkathi kulula futhi kuvame kakhulu ukuhlanganisa amaqabunga neziqu ndawonye bese uwomisa ngale njongo, zingashiswa ngazodwana. Amaqabunga aqhekekile noma ompuphu angashiswa njengempepho eyimpuphu futhi.
Intuthu iyasetshenziswa kweminye imikhosi yesintu eminingi. Abantu base-Ohlone bayisebenzisa njengengxenye yokulungiselela futhi ngesikhathi somdanso wabo wamabhere, ngokwesibonelo. Abahlabeleli bezinyoni baseCahuilla bavame ukuyisebenzisa ngaphambi kokuba bacule izingoma zomdabu. Kuyingxenye esemqoka yezinkolo eziningi zesizwe saseCalifornia. Ukusetshenziswa okufana nalokhu kuvame ukusitheka emehlweni omphakathi ngokuthandwa kokuncibilikisa isazi esimhlophe ngenhloso yaso yokuhlanza.
Ngokwesiko, amaqabunga ama-sage amhlophe ayehlafunwa yizizwe zaseCalifornia ukuvuselela umoya nokuqeda ukoma ezinsukwini ezishisayo. Lokhu kungenzeka ukuthi kungenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-eucalyptol emaqabungeni, okushiya ukuphola okuqabulayo, okucishe kube mint emlonyeni ngemuva kokuhlafuna.
Lokho okuqukethwe yi-eucalyptol kwenze kwaba lusizo olukhulu ngezikhathi zokugula ukuze kususwe isiminyaminya. Umkhuba ovamile kwakuwukubilisa amaqabunga e-sage imizuzu emihlanu kuya kweyishumi emanzini amancane, bese uphefumula umusi ovela esitsheni. Lokhu kungasiza ekunciphiseni isiminyaminya futhi kunciphise izimpawu ezibandayo.
ungalifaka kanjani ivolumu ezinweleni eziqondile
Amaqabunga eSage neziqu kwakubiliswa emanzini ukukhiqiza uketshezi olunephunga elinamandla oluzosetshenziswa njengohlobo lwe-shampoo kanye nokugeza umzimba. Lokhu akugcini nje ngokuqeda iphunga lomzimba, kepha kwanikeze nomphumela omncane wokulwa namagciwane osize ekugcineni isikhumba singenazinkinga zamagciwane.
Amaqabunga ayesetshenziswa njengesinongo ekuphekeni, kepha futhi anikela ngenani lezokwelapha njenge-poultice noma i-tincture futhi. Izimpande nazo zazisetshenziswa njengomuthi, futhi kukholakala ukuthi zazisiza ekuqiniseni abesifazane abathola ukubeletha.
Izimbewu zaqoqwa zafakwa impuphu kanye nommbila nezinye izimbewu nezinongo zokwenza upino, into efana nofulawa eyayiyisithako sokudla okuyisisekelo kubantu besizwe.
Iziqu zesazi esimhlophe zazivame ukusetshenziswa kwezokwelapha, kepha zazisetshenziswa ngezikhathi ezithile ekuphekeleni ukunambitheka. Ngezinye izikhathi kwakusetshenziswa iziqu ezincane ukwenza izinto ezincane ezinjengobhasikidi ngenkathi zisha futhi zithambeka.
Ukukhula kwe-sage emhlophe kungaba yinkohliso kubalimi abaningi ngoba kuphambana nalokho esikujwayele sonke. Endle, i-salvia apiana isitshalo esisehlane, esijwayele ukuhamba isikhathi eside phakathi kokuchelela nezimo ezishisa ngokweqile - zombili izinto esivame ukukhohlwa ngazo lapho sisitshala!
Kepha akunakwenzeka ukukhulisa i-sage emhlophe, futhi empeleni kufanele ngempela ukugcina lesi sitshalo esingapheli egcekeni lakho. Nalu uhlu lwezindlela ezinhle kakhulu zokukhulisa nokunakekela isitshalo sakho eminyakeni ezayo.
Kwabahlakaniphileyo abamhlophe, ilanga liyimpilo.
USalvia apiana ufuna ngokuphelele ilanga eligcwele. Ayisebenzi kahle ezimeni ezinomthunzi nhlobo. Khetha ingxenye eshisayo neshisa kakhulu yegceke lakho ukutshala isazi sakho esimhlophe, ngoba izokubonga ngakho.
I-sage emhlophe ayizithandi izimo zezulu ezibandayo. Uma ubusika bakho behla ngaphansi kwama-degree angama-20 ngokungaguquguquki, ungaba nobunzima bokukhulisa lapho. Kungcono kulezo zimo ukufakelwa isage yakho bese uyifaka endlini emazingeni okushisa afudumele ebusika, ukuyinikeza ukukhanya okuningi okuvela ekukhanyeni okukhulayo.
Lapho isazi esimhlophe sesisunguliwe, senza kahle kakhulu ezimweni ezomile kakhulu. Ibeka phansi izimpande ezijulile ukufuna okwayo amanzi.
Ngonyaka wokuqala ngemuva kokuqala isitshalo esisha se-sage noma utshale kabusha isitshalo esincane, sinisele kanye ngesonto. Awudingi ngaphezu kwe-1/2 ″ kuye ku-1 water wamanzi ngeviki. Kanciphisa kancane ukuchelela ngokuhamba kwesikhathi njengoba uhlelo lwempande lwesitshalo lusungulwa.
Uma isitshalo esimhlophe esimhlophe sesinonyaka noma emibili sikhona, kungenzeka ukuthi athole wonke amanzi awadingayo eyedwa. Ungakhetha ukuyinisela kancane ngezikhathi zesomiso noma lapho kushisa kakhulu, kepha uma sekusunguliwe, akufanele kudinge amanzi amaningi uma ekhona nhlobo.
Inhlabathi yesihlabathi ekhipha kahle kakhulu incanyelwa yisazi esimhlophe. Cabanga ukwakheka kwenhlabathi yemvelo kwegquma esifundeni esiseningizimu yeCalifornia - inhlabathi enothuli, enesihlabathi enogwadle oluningi olubolayo. Leyo 'inambitheka' ekahle yenhlabathi yesitshalo sakho se-sage esimhlophe. Uma lokhu kungachazi inhlabathi esifundeni sakho, khetha inhlanganisela yenhlabathi ekhulayo ye-cactus.
Uma unenhlabathi ecebile, ingazibekezelela lezo, kodwa qiniseka ukuthi zidonsa kahle ngokweqile njengoba isazi sizonda inhlabathi eshubile.
I-sage emhlophe ayidingi ukuvundiswa. Eqinisweni, ithanda inhlabathi enomsoco ophansi njengesitshalo esidala.
Uma ufuna ukunikeza izitshalo ezincane ukuqala kahle, gqoka eceleni uzungeze izitshalo zakho ngejazi elikhanyayo le- wachitha umquba wamakhowe . Lokhu kunikeza inani elincane le-nitrogen eyengeziwe ukusiza ukugqugquzela ukukhula kwezitshalo, kepha ngeke kuzinqobe izitshalo zakho.
Lesi sitshalo singakhula size sifinyelele ekuphakameni okungu-6 ′ ubude, futhi singasakazeka kalula ngaphezu kuka-3-4 'noma ububanzi. Ngenxa yalokhu, ngeluleka ukuthi ungatshali izitshalo zakho eduze kwezinyawo ezimbili, futhi uma uzama ngempela ukuziminyanisa, ungasondeli ku-18 ″. Badinga indawo ukuze izimpande zombili zikhule nokuthi isitshalo sikhule!
I-sage emhlophe ingasatshalaliswa ngezindlela ezimbili: kusuka enzalweni, noma ngokusikwa. Qhubeka ufunde ukuthola ukuthi ungazenza kanjani lezi zinhlobo ezimbili zokusabalalisa!
ingabe ukufihla kuqhubeka ngaphambi kwesisekelo
Imbewu iyindlela ejwayelekile kunazo zonke yokutshala izitshalo ezintsha. Kodwa-ke, imbewu emhlophe ye-sage idume kabi ngokuhluma. Akuvamile ukuba nesilinganiso sokuhluma esingama-20-30%. Ngenxa yalokhu, kuzodingeka utshale imbewu eningi kakhulu kunalokho okulindele ukuthi ekugcineni uzotshala.
Uma utshala imbewu yakho entwasahlobo, kulula kakhulu ukuqala isage ezimhlophe embewini eqala amathreyi noma amabhodwe kunokuyihlwanyela ngqo.
Fafaza imbewu yakho ebusweni benhlabathi, bese uyiphutha ngebhodlela lamanzi. Gcina imbewu yakho isendaweni esezingeni lobubanzi obungu-70-85. Nikeza ukukhanya okugcwele kusuka ekukhanyeni okukhulayo uma ukukhulisa endlini, noma ukubeke elangeni eliqondile.
Uzofuna ukugcina inhlabathi imanziswe kancane ekuqaleni kwezitshalo zakho ezincane, bese ulinda kuze kube yilapho inhlabathi iqala ukoma ngaphambi kokuyimanzisa futhi. Lapho izitshalo zakho seziqalile ukukhula, unganiseli isikhathi esingaphezu kwesisodwa ngesonto, kodwa kuphela uma umhlabathi uzizwa womile.
Uma unesitshalo esisunguliwe esimhlophe okungenani esineminyaka embalwa ubudala, ungakhetha ukuthatha ukusika okuncane bese uzama ukukuhlanganisa ukuze kube nezimpande. Lokhu futhi kunenani eliphansi lempumelelo elicishe libe ngama-20%. Kodwa-ke, uma ukuthola imbewu kunzima endaweni yakho, ukusika kumuntu onesitshalo esivele kungaba lula.
Yenza ukuxuba okukhethekile kwe-1/3 perlite, i-1/3 isihlabathi esimaphakathi, kanye ne-1/3 imbewu yokuqala umquba. Manzisa kancane ukuxuba bese ukufaka ezimbizeni. Bese, thatha ama-4-6 ″ ukusika ukusuka phezulu kwesitshalo esisunguliwe. Qiniseka ukuthi ukhetha ukusikwa okunamaqabunga asanda kwakha phezulu, bese usika ngenhla nje kwe-node yeqabunga.
Faka isiphetho sakho emanzini, bese ufaka impuphu yokuqothula njenge Bontone ukhula lwenkohlakalo egcwele Powder . Thepha ngobumnene ukusika ohlangothini lwesitsha ukuze unqamule noma ikuphi okweqile, bese ukubeka ebhodweni lakho elilungiselelwe. Zama ukuba namaqoqo wakho aphansi kakhulu amaqabunga amaqabunga cishe u-1/2 ″ ngaphansi kwenhlabathi, bese ucindezela inhlabathi ukuze ubambe isiqu endaweni.
Kuze kube yilapho ukusika kwakho kugxila, kungcono ukukugcina endaweni enethunzi ngaphezulu kwe- a umshini wokushisa lokho kusethwe phakathi kwama-degree angama-70-85. Imfudumalo izosiza ukukhuthaza ukukhula kwezimpande. Amanzi kuphela lapho inhlabathi izwa yomile ngaphansi nje komhlaba eduze nokusika, namanzi kancane ukuze anciphise inhlanganisela yenhlabathi.
Ngemuva kwamasonto e-4-6, thinta ngobumnene ukusika ukuze ubone ukuthi kukhona yini ukumelana. Uma ikhona, yakha izimpande. Susa izitshalo ezigxilile emgqeni wokushisa, njengoba ukufudumala kungasadingeki. Gcina izitshalo zakho emthunzini oyingxenye amasonto ambalwa, bese uzifakela ngokucophelela ebhodweni lomhlabathi ovundile, inhlabathi yesihlabathi noma inhlanganisela ye-cactus.
Ngalesi sikhathi, sekuyisikhathi sokuthi izitshalo zakho zijwayele ukukhanya kwelanga. Ukwanda kancane ngaphezu kwesikhathi samaviki ama-2-3, nikeza izitshalo zakho ze-sage ezimhlophe ukuthamela ilanga kakhulu zize ziphume ngaso sonke isikhathi. Uma sezenziwe zaqina, zigcine zize ziwe bese uzifakela ngaleso sikhathi.
Ukutshala kabusha isitshalo se-sage esimhlophe kwenziwa kahle ekwindla, njengoba ukuwa ezinyangeni zokuqala zentwasahlobo kuyizinyanga lapho ukukhula kwabasizi abamhlophe kuthanda ukwenzeka. Lesi sitshalo sihlala singasebenzi phakathi nezinyanga zasehlobo ezomile zonyaka, ngakho ukusifaka kabusha ekwindla kusinikeza ithuba elihle lokusungula izimpande eziqinile ngaphambi kokuba kufike ukushisa.
Isitshalo sakho se-sage kufanele okungenani sibe namaqoqo ama-2-4 amaqabunga eqiniso, kepha empeleni ngithanda ukuqala imbewu entwasahlobo ukuze izitshalo engihlela ukuzitshala ekwindla, ngoba kubanikeza isikhathi esithe xaxa sokuthuthuka.
Ukufakelwa kabusha, mane ulungise umbhede wakho ngenhlanganisela ekhulayo enesihlabathi, ekhipha kahle okhulayo noma ye-cactus potting. Beka isitshalo sakho se-sage esimhlophe emhlabathini ngokujula okufanayo nokuthi sasikhona ebhodweni. Qiniseka ukuthi uvula ngobumnene isisekelo sezimpande uma zithole izimpande, ukuze zikwazi ukwelulela emuva enhlabathini.
Nisela kancane ukufakelwa kwakho okusha, bese unika amanzi athe xaxa ekuqaleni, kodwa kungabi ngaphezu kuka-1/2 ″ kuye ku-1 ″ ngesonto. Unganiseli uma kufika imvula, njengoba izothola inala emvuleni.
Uma umane utshala impepho emhlophe ebhodweni elikhudlwana, le nqubo ifana nokufaka kabusha. Zama ukungazibandakanyi izitshalo eziningi ndawonye kunokuba zibelelwa ku-18 ″ ukuze zibe nendawo enkulu yokukhula. Khumbula, i-sage emhlophe ingaba isitshalo esikhulu lapho isemhlabathini, kepha ivinjelwa kancane uma isembizeni. Cishe awusoze wazuza ubukhulu obukhulu embizeni.
Abantu besizwe babezovuna imbewu yesazi esimhlophe ngokusika izimbotshana zembewu eyomile bese beyifaka esitsheni sobumba, bese bevala ngokuqinile noma bemboza phezulu. Babe bese bezamazamisa ibhodwe ukuze imbewu igqashule ama-pods abo. Lapho lokhu sekwenziwe, babethela inhlanganisela yembewu ne-pod esiqeshini sendwangu noma sesikhumba, basuse izingcezwana ezinkulu zikadumba, bese bephephetha kancane amakhoba.
Noma iyiphi imbewu eyayizotshalwa kabusha yayizothathwa iyiswe endaweni lapho abantu babekade bevuna khona ubuhlakani. Ngemuva kokubonga izitshalo ngobuningi bazo, imbewu encane ingafakwa phakathi kwezandla zomhlwanyeli bese ihlikihlwa ndawonye. Lokhu kunciphise indawo yembewu ukuyivumela ukuthi ithathe amanzi ngesikhathi semvula elandelayo.
Imbewu bese isakazwa kuyo yonke le ndawo bese ishiywa ihluma. Ngenkathi kungenzeka ukuthi imbewu izothathwa yizilwane zasendle, imbewu eyanele ingahluma ukugcina izitshalo zikhula endaweni.
Abalimi abaningi bavele bazitshale bodwa ubumhlophe obumhlophe, kepha buhambisana kahle nezitshalo ezilandelayo:
I-Black Sage (qaphela nje ukuthi ayithathi indawo!)
I-California Sagebrush (zigcine zihlukile ukuze ungazididanisi)
Kunamaqhinga ambalwa okugcina lesi sitshalo sizungeze, kokubili ekugcineni kanye nasemhlabeni osizungezile. Funda ukuze ufunde ukuthi kufanele uvune nini futhi kanjani isage yakho, ukuthi uyomisa kanjani futhi uyigcine kahle, nokuthi ungaqiniseka kanjani ukuthi ayilahli unomphela.
kanjani ukuya esikhathini sex
Izitshalo bezingeke zivunwe kuze kube yilapho okungenani zineminyaka embalwa ubudala. Lokhu kuqinisekise ukuthi lesi sitshalo sizokwazi ukuphatha iziqu ngaphandle kokuphazamiseka okungalungile.
Ngokwesiko, ukuvuna bekuzokwenzeka ngezikhathi ezahlukahlukene zonyaka ngokuya ngokuthi isitshalo besizosetshenziselwa ini.
Uma lesi sitshalo senzelwe ukuhlanza izinhloso zentuthu, besizovunwa ngemuva kwesikhathi sesimo esomile. Lokhu kwavumela isitshalo ukuthi sisebenzise amanzi aso amaningi agcinwe emaqabungeni aso, okwenza uwoyela osemaceleni ube namandla kakhulu. Ngokufanelekile, amaqabunga asazothambeka futhi kube nokukhula okuncane, kepha abe nephunga elinamandla, elinephunga lapho ehlikihlwa.
Ngezinhloso zokwelapha noma zokudla, i-sage emhlophe ingavunwa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, kepha ukunambitheka kwayo noma izakhiwo zayo zingahluka. Futhi, lokhu kuhlobene nokuthi kungakanani amanzi isitshalo ebesingawagcina emaqabungeni aso. Izimo zokuqina zenze amakhambi okudla afutha kakhulu noma zaholela emithini enamandla, lapho izimo ezimanzi zazivame ukuzinciphisa futhi zingadinga amanani amakhulu ukuthi avunwe.
Kubalulekile ukusika isage emhlophe ngokuhlanzekile usebenzisa izigaxa zokudlula noma izigaxa. Zama ukugwema ukuchoboza iziqu, ngoba lokho kungaholela ezifweni.
Ungalokothi uthathe ngaphezu kwengxenye yesithathu yanoma yisiphi isitshalo ngesikhathi esithile, ngoba lokho kungadala ukuthi isitshalo sithuke. Sika kuphela amathiphu ezitshalo amasha, aqabulayo, kushiya iziqu ezindala nezokuthambisa ziqinile. Sika ngenhla nje kwe-node yeqabunga, ngoba lokho kuzodala ukuthi igatsha elingezansi lithumele ukukhula okusha kwegatsha kusuka kuma-node futhi likhiphe ngaphezulu.
Qiniseka ukuthi lapho uvuna isihlakaniphi sakho, ukhetha usuku lapho bekungazange ina khona, nokuthi uvuna phakathi nezinsuku noma ntambama lapho wonke amazolo asekuseni esevele ehwamukile. Lokhu kuqinisekisa ukuthi amaqabunga akho azokoma ngesikhathi sokuvuna, anciphise amathuba okuba isikhutha sakhe kuwo kamuva.
Ukuvuna imbewu emhlophe ye-sage, linda kuze kube yilapho izitshalo sezichume futhi izimbali seziqala ukoma. Thatha izikhwama zamaphepha uzifake ngokucophelela phezu kwesiqu sembali, usebenzisa ibhande le-rubber ukuzivikela endaweni yazo. Bese uvumela ukuthi ziqhubeke zomile. Kwesinye isikhathi nyakazisa isikhwama ukuze ubone ukuthi uzwa ukuduma ngaphakathi. Uma usukwenzile, amacembe ayawa, futhi ungasika isiqu ngaphansi kwesikhwama bese ususa. Nyakazisa isikhwama ukukhulula imbewu kuma-pods abo.
Lapho usuvune isihlakaniphi sakho, kubalulekile ukusomisa ngokushesha. Kunezindlela ezimbili zokwenza lokhu: kungaba okuxekethile, noma okuyinqwaba.
Amahlamvu we-sage alahlekile angomiswa ngokumane uwafake esikrinini semesh endaweni enomswakama ophansi nokukhanya okuphansi. Kufanele ukwazi ukudiliza kalula iqabunga phakathi kwezandla zakho lapho selomile. Gcina isihlakaniphi samaqabunga esitsheni esingangeni manzi. Ungangeza iphakethe le-dessicant elimunca umswakama uma ungathanda ukuyigcina yomile.
Ukwakha izigaxa ze-sage, qiniseka ukuthi amaqabunga akho e-sage avuniwe omile ngokuphelele ekuthinteni. Thatha iziqu eziningi ze-sage uzihlanganise ndawonye, ​​ubophe ucezu lwentambo kakotini ezungeze isiqu ukuze uziqoqe. Bese, bamba isiphetho sesiqu ngesandla esisodwa, bese uqoqa ngokucophelela amaqabunga abhekane neziqu bese amaqabunga ephela ekhomba phezulu kwenqwaba.
Songa umucu wakho uzungeze inqwaba izikhathi eziningi ukusuka kusisekelo kuya kuchopho ukuvikela amaqabunga endaweni, uqede ngokubopha intambo ekugcineni kwesiqu. Shiya intambo eningi eyengeziwe ukuze udale iluphu, bese ulenga izinyanda zakho zabahlakaniphile endaweni eyomile, emnyama ukuze womile ngokuphelele. Kuyasiza uma ungaba nomshayeli ophephetha kancane kuzo ukunciphisa umswakama ezinqwabeni ngokushesha okukhulu.
Beka izigaxa zakho zezinsizwa ezomisiwe ebhokisini lokugcina. Amakhadibhodi empeleni alungele le njongo, ngoba angamunca noma yimuphi umswakama osalile okungenzeka ukuthi izinyanda zingaba nawo.
Inothi elilodwa: ngicela ungasebenzisi ukushisa ukusheshisa inqubo yakho yokumisa izazi, ngoba lokhu kuzoyinika iphunga elingavamile nelingemnandi. Ama-dehydrators, kuhhavini, zonke lezo zindlela azisihle kulesi sitshalo. Ukomiswa komoya kungcono kakhulu.
Njengoba i-sage emhlophe seyidume ngokweqile ngezinhloso zokubhema, kube khona inani elikhulayo labantu abalicoshayo endle. Lokhu akusikho njalo ukuthi abantu bayiqoqela ukuzisebenzisela bona. Imvamisa, iqoqwa ngenhloso yokuthengisa kabusha, futhi awukho umzamo wokuvuselela izitshalo noma ukukhuthaza ukukhula kwazo okuqhubekayo.
Ngenxa yalokhu, i-salvia apiana ngokushesha iba uhlobo olusengozini endaweni yayo yemvelo. Ngenxa yalokhu, angincomi ukuhlakanipha okuvunwa endle uma ungakugwema ukwenza kanjalo. Njengoba ngokwemvelo ichuma ezindaweni lapho futhi ithandwa ngokwedlulele, lokhu sekuqedile izitendi zama-sage amhlophe kuze kube seqophelweni lokuthi kube nzima ukuzithola ezindaweni ezingavikelekile.
Uma uzithola udinga ukuvuna isazi esimhlophe sasendle, zinike isikhathi sokusabalalisa imbewu yesage eduze nalapho uvune khona, futhi mhlawumbe uthathe isipompo-sprayer esigcwele amanzi bese uyiphatha kancane indawo ukukhuthaza ukuhluma. Zama ukukhuthaza ukukhula okusha kwesitshalo se-sage lapho uvune khona ukuze isitshalo sizoqhubeka sikhule lapho isikhathi eside ungasekho.
Kepha ngincoma impela ukukhetha ukuthatha ama-cuttings ambalwa noma ama-pod pods bese uzikhulisela wona. Lapho isitshalo sakho sesisunguliwe, uzoba nomthombo onamandla wokuhlakanipha onawo!
Le vidiyo inikeza ukuqonda okuvela kubantu bendabuko besizwe saseCalifornia ukuthi kungani ukuhlangana kwasendle kungaba yisibusiso nesiqalekiso. Kuyinto ethokozisayo yokuqonda isiko lamanje laboMdabu nokuthi bazama kanjani ukondla lezi zitshalo.
Ngenkathi sengidlulile ezinkingeni ezijwayeleke kakhulu esevele zikhona ezigabeni ezingenhla, kusekhona ezinye izinto ezimbalwa okufanele wazi ngazo. Ake sidlule kulabo manje.
Njengoba i-sage emhlophe ingeyendabuko eningizimu yeCalifornia, kunzima kakhulu ukuyitshala ezindaweni lapho isimo sezulu sibanda khona. Noma kuphi lapho kunamazinga okushisa ajwayelekile angaphansi kokubanda, ungathola ukuhlupheka kwesitshalo sakho.
Izitshalo ezincane ezincane ezimhlophe kufanele zimbiwe ngokucophelela futhi zidluliselwe embizeni phakathi nalezo zinyanga zezulu ezibandayo. Qinisekisa ukuyigcina endaweni efudumele ngokukhanya okukhulayo ukuyinikeza konke ukukhanya ekudingayo.
Izitshalo ezindala, ezisunguliwe, ikakhulukazi ezinkulu, kunzima kakhulu ukuzihambisa. Lapho isitshalo sakho se-sage sesineminyaka engaphezu kwengu-3 ubudala, maningi amathuba okuthi ngeke usafuna ukuzama ukusifaka kabusha ukuze ungazibeki engcupheni yokufakelwa kwengcindezi. Kuleli qophelo, kuwumqondo omuhle ukugunda isihlabathi phezulu kwenqwaba engaphezulu kwesiqu sesitshalo. Ngenkathi ungahlushwa ukulimala kwesiqu, ukugcina isisekelo sifudumele kufanele kuvumele isitshalo ukuthi sibuyele emuva kwesikhathi.
Izintwala Izothuthuka ezitshalweni zesage. Ngemuva kwakho konke, isazi esimhlophe sigcina amanzi aso athe xaxa emaqabungeni aso ayinyama, anesikhumba, futhi lokho kwenza kube yisibiliboco sezintwala! Ungasebenzisa thatha uwoyela ukuxosha lezi zinambuzane futhi uzigcine zikhona. Kodwa-ke, uma uhlela ukuvuna ngenhloso yokushisa, gwema ukusebenzisa uwoyela we-neem izinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyishumi ngaphambi kokuvuna.
Izimpukane ezimhlophe ngesinye isinambuzane esingadala umonakalo esihlakaniphi sakho esimhlophe. Lezi futhi zithanda ukumunca umusi wesitshalo emaqabungeni e-sage, kepha ngokubonga, kuyafana thatha uwoyela oyisebenzisayo ukuvimbela ama-aphid nawo azovimbela lezi zinambuzane, zombili ngaphakathi kwendlu eluhlaza noma ngaphandle.
I- obomvu nomnyama imbuzane eyisicaba (I-Brevipalpus phoenecis) ngesinye isinambuzane esincela ubisi esingahlasela isazi sakho, omnivorous mite flat (IBrevipalpus calflixicus). Kokubili lokhu kuthathwa ngokuthi “izibungu zesicabucabu esingamanga”, futhi kungadala umbala onsundu noma ubomvu, amaqabunga abukekayo, nezinye izindaba. Ngokujabulisayo, thatha uwoyela kuyasebenza nangokulwa nalokhu, futhi!
Futhi, kunjalo, kuhlale kukhona isicabucabu uqobo. Yize lokhu kungavamile kakhulu kwizazi ezimhlophe kunezinye izazi ezingenamandla, zisengakwazi ukuhlala, ikakhulukazi phakathi nezinyanga ezomile zonyaka. Isikhathi esisodwa futhi: sebenzisa i- thatha uwoyela !
Ngempela, uwoyela we-neem uvikela kakhulu cishe kunoma iyiphi inkinga yezilokazane uSalvia apiana angaba nayo. Uma unezimo eziya ziba zimbi kusuka kunoma iziphi zalezi zinambuzane, ungakhetha ukusebenzisa insipho yokubulala izinambuzane enamafutha e-neem ahlanganiswe kuso futhi ugqoke yonke indawo yesitshalo. Lokhu kufanele kususe izinambuzane zakho kahle, futhi ukusebenzisa njalo uwoyela we-neem kuzozivimba.
Isifo esande kakhulu sesazi esimhlophe sithi isikhutha esiyimpuphu . Njengoba i-sage ithanda izimo ezishisayo, noma imuphi umswakama ohambisana nalokhu kushisa ungadala ukubheduka, njengomswakama osala emaqabungeni. Ngokujabulisayo, okufanayo thatha uwoyela okuzovikela isitshalo sakho ekulweni nezinambuzane kuyindlela enhle yokuvikela isikhutha se-powdery.
Ukugqwala ngesinye isifo esingathinta isihlakaniphi sakho. Izinhlobo zePuccinia ne-Uromyces ziyingozi kakhulu. Lawa aqala njengamachashaza aphuzi noma amhlophe ngaphezulu kwamaqabunga akho, kepha ingaphansi lamacembe lingakha ukugqwala kwe-orangish ezindaweni ezifanayo. Susa noma yini ethintekile ngokushesha nje lapho uyiqaphela, futhi ugweme ukuchelela amaqabunga esitshalo. Qiniseka ukuthi inokugeleza komoya okuningi ukuvumela amaqabunga ukuba omile.
Ukubola kwezimpande enye inkinga lapho isage emhlophe isengozini yayo. Lokhu kuvame ukubangelwa elinye lama-fungal agents asebenza enhlabathini emanzi ngokweqile. Ukuvimbela izingqinamba zokubola kwezimpande, umane ungabi ngaphezulu kwamanzi. Isazi sakho sizokubonga ngezindlela eziningi!
IMP: Amaqabunga neziqu ezimhlophe ziba bomvu, zibe nsomi, noma zibe yingqamuzana ngenxa yesomiso. Lokhu empeleni akuyona inkinga yesitshalo, ngoba sizoqhubeka nokuphila noma ngabe amaqabunga neziqu ezingezansi ziqala ukubomvu. Kungaba kuhle impela!
Uma uqala ukubona amaqabunga abomvu, unganikeza lesi sitshalo usizo oluncane ngamanzi acwazimulayo phansi kwesazi. Lokho kufanele kukuphazamise ngqo.
Impendulo: Lo ngumbuzo okhohlisayo ongawuphendula, ngoba kuya ngosayizi wesitshalo sakho nokuthi usinqume isikhathi esingakanani ukukhuthaza ukuphuma kwegatsha okuningi. Izitshalo ze-sage ezindala, ezinamagatsha amakhulu zingakhiqiza inqwaba yezazi, kepha izitshalo ezincane zingaveza kuphela izinyanda ezimbalwa.
Izitshalo ezingaphansi konyaka akufanele zinqunywe, futhi empeleni, unyaka wesibili, kufanele uqaphele ukuthi ungathathi kakhulu.
IMP: Kunezindawo eziningi ku-inthanethi zoku-oda imbewu yezinsalela ezimhlophe, futhi empeleni ungakwazi ukuthola izitshalo zama-sage amhlophe ezikhungweni zasengadini zasendaweni uma useCalifornia. Ngenkathi kungekho mbewu emhlophe ehlakaniphile ezoba nesilinganiso esimangalisayo sokuhluma, ngithole imbewu ye-salvia apiana kusuka Imbewu yase-West Coast ukuze ithembeke ngokuqhathaniswa, njengembewu evela Ukuthula Kwe-Valley Farm Supply . Womabili lawo mabhizinisi azinze eCalifornia, futhi ayakwazi ukufinyelela ezitshalweni zokukhula kwasendle.
Ngabe usuvele ukhule isazi esimhlophe? Ngabe ucabanga ukuyengeza engadini yakho? Ngazise kumazwana angezansi!
Yabelana ngalokhu nanoma yimuphi umngani wezingadi owaziyo ukuthi ngubani ongakuthola kubalulekile!
Izindlela Ezi-4 Zokubhekana Nesikhathi Sakho Ngesikhathi Sesikhathi Se-Bikini
Ingxoxo Phakathi KukaMichelle Obama no-Oprah Winfrey Injengomlingo (Futhi Iyabiza) Njengoba Ungalindela
Izinto eziyi-8 Zokwazi Ngomuntu Wakho Ngaphambi Kokuhlanganyela
8 Best Modiller Models for 2021: Yikuphi Okufanele Ukhethe
Ukuthengiswa kwe-WFH ye-Anthropologie Yiphupho Lethu Eliyikhabethe Elihle
ithawula lezinwele ze-microfiber ngezinwele ezisontekile
mary kate ashley olsen movie
amacici ahlukene endlebeni ngayinye
ngaphezulu kwamabhuzu amadolo ngesiketi